Semalt - Herin'ny fampiroboroboana SEO
Semalt ankehitriny, no vahaolana tonga lafatra amin'ny fampiroboroboana tranonkala eo amin'ny motera fikarohana Google. Ny serivisy ataonay dia misy mihoatra ny SEO optimization amin'ny alàlan'ny fitaovana sy teknika fanta-daza, dia namolavola fepetra tsy mbola nisy teto natao ho amin'ny fanatanterahana ny tetik'asa ara-barotra. Amin'ny teny hafa, Semalt dia sampam-barotra digital marketing izay manana traikefa an-taonany maro amin'ny fampiroboroboana SEO.
Ny serivisy dia fampiasan'ny tompona tranokala maherin'ny tapitrisa. Mampiasa ekipa matihanina marobe ny orinasa, manolotra ireo haingo maro isan-karazany: manam-pahaizana manokana amin'ny SEO, manam-pahaizana manokana momba ny IT, ny mpitantana ny varotra, ny mpamorona tranonkala, ny mpanoratra mpanoratra, ny fiteny ary ny tompon'ny sary mihetsika. Mazava fa tena ratsy avokoa ny zava-drehetra, noho izany, ny vokatry ny orinasanao dia miankina tanteraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Semalt.
Inona ny SEO
Mba hahafantaranao ny fitsipiky ny serivisinay dia mila manana hevitra fototra ianao momba ny singa SEO sy ny fomba fiasan'izy ireo. Andao hodinihintsika ireo misongadina. Search Engine Optimization dia fepetra raisina hanatsarana ny toerana misy ny tranonkala eo amin'ny motera fikarohana amin'ny alàlan'ny teny fanalahidy. Ny tanjona voalohany amin'ny fampiroboroboana SEO dia ny fisarihana ny mpanjifa amin'ny tranokala amin'ireo milina fikarohana. Ny andraikitra voalohany amin'ny fampiroboroboana ny fikarohana dia ny famoahana votoaty kalitao mba hahatonga ny tranokala hahatratra ny toerana ambony ao amin'ny motera fikarohana.
Ny optimization SEO dia mifantoka amin'ny fitomboan'ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala, izany hoe, ny fampitomboana ny isan'ny olona mitsidika ny tranokala isaky ny atin'ny vanim-potoana. Toerana misy eo amin'ny motera fikarohana amin'ny fangatahana lehibe sasany ary ny habetsaky ny fifamoivoizana dia maneho ny fahitan'ny toerana. Ny milina fikarohana dia mihazona tarehimarika marobe. Mandritra izany fotoana izany, ny optimisation fikarohana dia tanterahina amin'ny lafiny anatiny sy ivelany.
Ny antony momba ny laharana anatiny dia miasa mivantana ao amin'ny tranokalan'ny tompona. Ny fampiroboroboana, amin'ity tranga ity, dia midika fanatsarana ny toetra ara-teknika ao amin'ny loharanon-karena, mamorona rafitra lojika, mametraka rohy anaty, manomana atiny mahasoa sy kalitao.
Ny lafin'ny toeran'ny ivelany dia ny fampiroboroboana ny tranokala amin'ny alàlan'ny loharano hafa. Ny dingana voalohany dia ny fahazoana rohy avy any ivelany izay hitarika mankany amin'ny pejin-tranonkalanao.
Ny lafin'ny toeran'ny ivelany dia ny fampiroboroboana ny tranokala amin'ny alàlan'ny loharano hafa. Ny dingana voalohany dia ny fahazoana rohy avy any ivelany izay hitarika mankany amin'ny pejin-tranonkalanao. Ny asan'ny Semalt dia ny mandray an-tànana ny anton-javatra rehetra ary hitady hetsika ilaina amin'ny alàlan'ny fitaovana manokana. Ankoatr'izay, ny fahasarotan'ny fihetsiketsehana dia hitarika ny tranokala any amin'ny toerana ambony. Izay te hahita fahombiazana amin'ny raharaham-barotra dia tsy mahazo fahatakarana feno momba ny SEO. Ny vahaolana tsara ho azy ireo dia ny manararaotra ny teknika Semalt, ny fahombiazan'ny fanamafisana ny valiny miharihary.
Inona no ataon'i Semalt
Ireo hevi-dehibe ao amin'ny sampanay manokana dia:
fikarohana fikarohana fikarohana;
tranokala momba ny tranokala;
horonantsary fampiroboroboana ny orinasanao;
fampandrosoana ny tranonkala.
Ho fampiroboroboana tranonkala, Semalt dia namorona fomba tsy manam-paharoa mba handinihana ny valiny alohan'ny hanaovana fampiasam-bola any amina orinasa iray. Ny traikefa be dia be eo amin'ny indostrian'ny SEO sy ny fahalalana marketing dia nahafahan'ny orinasa ho lasa mpamorona ny vahaolana SEO stratejika, toy ny AutoSEO, FullSEO. Diniho ny soa azo avy amin'ireo fanentanana ireo.
Ny famintinana ireo soatoavina amin'ity fampielezan-kevitra ity dia afaka manasongadina ny tombontsoa lehibe azo avy amin'izany:
mifidy teny manan-danja indrindra;
fanitsiana ny tranonkala diso;
mamorona fitenenana amin'ny tranokala misy ifandraisany;
Ny dingana AutoSEO dia tanterahina toy izao: Rehefa voasoratra anarana, ny tompon'andraikitra amin'ny tranokala dia hanome tatitra fohy momba ny firafitry ny tranonkala mifanaraka amin'ny fenitra SEO. Ity fampahalalana ity dia hanampy hanatsara ny toeranao ao amin'ny Google. Ny mpitantana anao manokana, miaraka amin'ny mpanolo-tsaina SEO, dia hanao fandinihana lalina ny tranokalanao ary hanao lisitr'ireo hadisoana tokony raikitra. Ny injeniera SEO dia manendry teny fanalahidy mety hanamafisana ny fifamoivoizana tranonkala.
Ny teknolojia maoderina dia manisy rohy tsy tapaka amin'ny Internet miaraka amin'ireo votoaty mifandraika amin'ny loharanon-tserasera samihafa. Vokatra tsara dia tanterahana amin'ny fampidirana ireo rohy rehetra mankany anaty atiny manokana. Semalt dia manana efa ho 70,000 tranonkala mpiara-miasa avo lenta momba ny lohahevitra maro izay zaraina mifanaraka amin'ny vanim-potoana momba ny sehatra. Manara-maso tsy tapaka ireo rohy sy ny toerana misy azy ireo ao amin'ny milina fikarohana izahay. Ny sokajy rohy dia ampidirina amin'ireto manaraka ireto:
40 isan-jatony - rohy misy vatofantsika;
50 isan-jato - rohy iraisana;
10 isan-jato - rohy famantarana famantarana.
Taorian'ny nanomezana ny fidirana tontonana fitantanana FTP na CMS, ireo injeniera Semalt dia nanao fanovana voafaritra, izay aseho amin'ny tatitra momba ny tranonkala. Ny fanovana vita amin'ny tranokalanao noho ny fahazoan-dàlana ireo mpanadihady sy mpanoro hevitra SEO dia miantoka ny fanentanana AutoSEO mahomby. Semalt dia manao fanavaozana ny laharana isan'andro isan'andro misy ireo teny manan-kaja tafahoatra mba hampahafantaranao anao ny fandrosoana amin'ny fampielezan-kevitra SEO.
Ny mpikarakara ny Semalt dia mandinika tsy tapaka ny fizotran'ny AutoSEO, manome ny e-mail na scans misy fampandrenesana anatiny. Zava-dehibe ny manamarika fa $ 100 isam-bolana ny vidin'ny fampiroboroboana ny tetikasa rehetra. Mandritra ny fotoam-pitsarana, mitentina $ 0,99 ny fampielezankevitra AutoSEO amin'ny tetikasa tokana.
FullSEO dia voatondro ho toy ny andiany fomba fiasa amin'ny anatiny sy ivelany amin'ny famokarana tranonkala izay mamokatra fahombiazana miavaka ao anatin'ny fotoana fohy. Hanatanteraka ny optimization anatiny sy ivelany, manam-pahaizana tsara, ary manoratra lahatsoratra arakaraka ny zavatra voafaritra ho an'ny SEO ny manampahaizana. Vokatr'izany, ny fandraharahana an-tserasera dia handroso afaka roa volana. Miaraka amin'ny fanentanana feno feno FullSEO dia hitombo be ny taham-bolan'ny tahiry, ka lasa 700% ny fiverenan'ny fampiasam-bola.
Ny fanokafana ny fampielezankevitra FullSEO dia ahafahanao maka ny toerana ambony ao amin'ny sehatry ny tsena, manosika ny mpifaninana aminao tsy ho ela. Ity rafitra fanavaozana tranonkala ity dia hitondra valiny mahasoa ho anao avy hatrany. Hahatonga anao hahatsapa amin'ireo mety ho mpanjifa.
Aorian'ny fisoratana anarana, ny rafitra fanadihadianay dia hanome tatitra fohy momba ny firafitry ny tranokala manaraka ny fenitry ny teknikan'ny SEO. Ary ny mpitantana anao, miaraka amin'ny manam-pahaizana manokana amin'ny SEO dia hanao fanombanana semantik feno amin'ny tranokalanao, ny fanamafisana azy, mamaritra ny fototry ny semantik.
Raha manao rejistra ireo bika tsy maintsy manitsy izy ireo, ny mpamorona SEO dia mamaritra ny teny mitombo ny fifamoivoizana. Ny tranokalan'ny Internet dia miaritra ny fahombiazan'ny anatiny amin'ny lafiny rehetra natolotra ao amin'ny FullSEO. Taorian'ny nahazoana ny fidirana amin'ny tontolon'ny fitantanana FTP sy CMS, dia manamboatra fanitsiana voatondro ho famintinana ao amin'ny tranokalanao ny mpamorona, ka manangona ny fanatontosana ny dingana FullSEO.
Ny fanatsarana ivelany: ny manam-pahaizana SEO dia manomboka mampiditra rohy mankany amin'ireo loharano an-tranonkala mifandraika amin'ny niche, mifanentana amin'ny atin'ny tranokalanao. Ny rohy nampidirina dia afangaro ao anaty atokana manokana, noho izany, manamora ny fahazoana vokatra tonga lafatra. Ny orinasa dia manana habetsaka betsaka amin'ny tranokala mpiara-miasa amina karazan-jotra isan-karazany, izay nosokajiana araka ny halavan'ny sehatra sy ny laharan'ny Google Trust.
Ny fananganana rohy dia notanterahina tsy tapaka noho ny isam-paritra:
10 isan-jatony - rohy amin'ny marika famantarana.
Ny mpandrindra ny tenanao manokana dia mifehy ny fampielezan-kevinao ho ampahany amin'ny fandaharana, manavao ny lisitr'ireo laharam-pahamehana voarohirohy, manatitra tatitra manokana aminao, mampahafantatra momba ny fitomboan'ny fampielezampirenena SEO. Ny mpitantana dia mifampiresaka aminao andro aman-alina.
Raha toa ka ajanonao ny fampiroboroboana ny SEO, ho voafafa avokoa ireo backlink ary hangalan'i Google azy ireo ao anaty tahirin-kevitra ao anatin'ny volana maromaro. Na dia mety hianjera aza ny laharana tratra, na aiza na aiza, dia ho avo lavitra kokoa izy ireo alohan'ny hanatanterahana ny SEO. Ny fampiroboroboana ny tranonkala SEO dia mitaky fomba iray. Ny vidin'ny farany dia apetraka aorian'ny manampahaizana manokana momba ny SEO manadihady ny tranokalanao ho fanampiana amin'ny manager an'i Semalt.
Semalt ihany koa dia mitarika ny Web Analytics. Izy io dia rafitra fanadihadihana voalamina izay manolotra fotoana vaovao hanaraha-maso ny tsena. Azo antoka fa manome alalana ireo mpampiasa hanara-maso ny toeran'ny mpifaninana amin'ny alàlan'ny fanomezana fampahalalana momba ny fandraharahana an-dàlana. Raha manara-maso ny zava-misy amin'ny tranokala, dia ahafahanao mamorona fahitana mazava momba ny toeran'ny orinasanao eo amin'ny tsena. Ity fampahalalana an-tsoratra ity dia ahafahana manasongadina ireo antsipiriany manan-danja amin'ny asanao ho avy ary mameno ny tranokalanao amin'ny votoaty miorina amin'ny teny fanalahidy mifanaraka, ny fividianana / fifanakalozana, ary ireo teny fanalahidy mifanaraka amin'izany.
Semalt Analytics dia milaza aminao ny zava-misy rehetra momba ny toeran'ny mpifaninana aminao eo an-tsena. Ny fampiasana mahomby amin'ity rakitra ity dia ahafahanao mahomby amin'ny sehatry ny fikarohana, tanteraho ny fanentanana ara-barotra. Ny fampahalalana azo avy amin'ny famakafakana ara-barotra dia manova ny fananana vaovao ho an'ny fizarana entana & serivisy, ankoatr'izany dia mamorona varotra iray amin'ny faritra maro, manadihady ny endri-paritra rehetra.
Ny famakafakana dia azo fintina toy:
soso-kevitra momba ny teny fanalahidy;
famaritana ny teny fanalahidy;
Ahoana ny fiasan'ny Semalt Analytics
Raha vantany vao misoratra anarana ao amin'ny tranokalanay izahay dia manomboka ny dingana fanangonana angon-drakitra mangadihady ary mahazo fampandrenesana mahaliana mampiseho ny toeran'ny tranonkalanao ary koa ny toeran'ny mpifaninana aminao. Ahitana ny torolàlana momba ny fananganana tranonkala mifanaraka amin'ny fenitra SEO ihany koa ny tatitra.
Ireo izay efa manana kaonty dia mety manampy tranonkala iray hafa ho an'ny kabinetra manokana ary hotsarain'ilay rafitra io. Raha nozahana ny tranokala, ny rafitra ataontsika dia manolotra mivarotra teny fanalahidy miorina amin'ny antontan-kevitra nalaina tamin'ny fanadihadiana. Ireo teny fanalahidy ireo dia hisy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny fidiran'ny tranokala. Azonao atao ny manampy na mamafa ny teny fanalahidy hafa amin'ny alain'ny safidy.
Mamakafaka ny laharan'ny tranokala izahay ary manara-maso ny fandrosoana 24-ora isan'andro. Ankoatra izany, manangona vaovao momba ireo mpifaninana aminao izahay. Semalt manavao tsy tapaka ny toerana misy ny tranonkalanao, ka manome anao vavahady farany indrindra hanamarinana ny toerana misy ny tranonkala amin'ny fotoana rehetra tianao. Azonao atao ny mampiasa ny Application Programming Interface (API). Tena tsara kokoa izany satria mandeha ho azy ny fisafidianana ny angon-drakitra, ahafahan'ny mpampiasa mijery ny fampahalalana nohavaozina. Jereo ny angon-drakitra famaritana tsy tapaka amin'ny loharano nofantenanao.
Ny vidin'ny Analytics dia miankina amin'ny tahan'ny voafidy, jereo eto ny sokajy eto ambany:
STANDARD - $ 69 isam-bolana (teny fanalahidy 300, tetikasa 3, tantaran'ny toerana 3 volana);
TANTARANY - $ 99 isam-bolana (teny 1 000, teny 10, tantaran'ny toeran'ny 1 taona);
PREMIUM - $ 249 isam-bolana (teny tokana 10 000, tetikasa tsy misy fetra).
Amin'ny maha-ampahany an'ny programa fampiroboroboana ny SEO-toerany, ny orinasanay dia manome horonan-tsarimihetsika manokana hidiran'ny mpanjifa amin'ny orinasanao. Ny mpandray anjara amin'ny fanazavanao dia ahitana ny fampiavaka lehibe ny asan'ny orinasa manondro ny tombontsoa lehibe amin'ny fiaraha-miasa aminao.
Ireo manam-pahaizana momba ny ekipa Semalt dia voaomana tsara amin'ny asa sarotra. Izy ireo dia afaka mitazona resaka amin'ny fiteny samy hafa ary mitaky dinika mahasoa. Ny fandanjalanjana ny fahombiazan'ny Semalt dia aseho ao amin'ireo hevitra marobe momba ny mpanjifantsika. Miara-miasa aminay, ny mety hahombiazana dia manodidina ny zato isan-jato, amin'ny farany, ho lasa loharano tsy misy farany foana i Semalt. Ny fahombiazanao dia taratry ny fandresentsika!